Iko kushambadzira kwehukama nemazano ekuishandisa | ECommerce nhau
Encarni Arcoya | 13/08/2021 12:17 | Yakagadziridzwa ku 29/08/2021 19:28 | Kutengeswa kweIndaneti
Wati wambonzwa nezvehukama kushambadzira? Sezvaunoziva, maratidziro eInternet maratidziro ari kuramba achichinja uye izvo zvinowanzoreva kuti iwe unofanirwa kuziva izvo zvinouya uye zvinoshanduka. Mune ino kesi, iyo relational marketing Iko kushanduka kwechinyakare, asi zvakadaro havazi vazhinji vanozvinzwisisa, ndoda kuitisa.
Naizvozvo, panguva ino isu tinoda kukubatsira kuti unzwisise pfungwa yayo, chii chinochiparadzanisa neyechinyakare, zvayakanakira uye nezvazvinobatsira. Uye zvakare, iwe unozodzidza kuishandisa mune rako bhizinesi. Tinogona kusvika kubasa here?
1 Chii chinonzi kushamwaridzana kushambadzira
1.1 Musiyano uripo pakati pehukama kushambadzira uye kushambadzira kwetsika
3 Zvakanakira kushandisa kushamwaridzana kushambadzira
4 Maitiro ekuishandisa kune rako bhizinesi
Ukama kushambadzira inozivikanwa zvakare sehukama kushambadzira. Iyo inosanganisira akateedzana emazano uye nzira dzine mhedzisiro inowanikwa munguva refu. Iyo Chinangwa chekushambadzira ichi ndechekuvaka kuvimbika kwevatengi, nekudaro zvichibatsira kuwedzera vatengi kutenga uye kubatsira kwete chete iyo kambani, asi mutengi iye pachake. Kune izvi, kuvimba uye kuwedzerwa kukosha mbiru mbiri dzakakosha kwazvo.
Mune ino kesi, hukama hwehukama hwakavakirwa pamusoro pezvose kumutengi, uye kwete pachigadzirwa, ndosaka marongero anoitwa ari kutarisana nekupa kutarisisa kune munhu zvichienderana nevatengi. Uye hazvisi zvekugutsa iwe kuti utengese zvigadzirwa, asi pakukushandira iwe nenzira inovimba kuti chero kutenga kwaunoita muchitoro kunouya nemhando.
Musiyano uripo pakati pehukama kushambadzira uye kushambadzira kwetsika
Ukama kushambadzira hunogona kunzwisiswa sekushanduka kwekushambadzira kwechinyakare, asi chii chinosiyanisa izvo zviviri? Mune ino kesi, haichisiri chete iyo yekuti kushambadzira kwehukama kunotarisa kune vatengi uye kushambadzira kwechinyakare pachigadzirwa, asi kunoenderera mberi:
Kutaurirana. Nepo iyo yechinyakare ichitsvaga kusvika kune vakawanda vateereri nekugadzira meseji inogona kusvika kune yakakura nhamba, mune nyaya yehukama yakavakirwa pamitauro yega uye yakasarudzika, ichipa pekutanga kune vatengi pachavo.
Strategies. Kusiyana nekutengesa kwechinyakare, izvo zvinoita marongero epfupi-pfupi, kushambadzira kwehukama ndeyakareba, nekuti izvo zvainoedza kuita kuvaka kuvimbika kwevatengi.
Chekupedzisira chinangwa. Isu takambotaura kuti chinangwa chehukama kushambadzira chinotarisana nemutengi. Asi pane izvi haadi icho chinangwa kuti chiitwe munguva pfupi, asi munguva refu, uye haatsvage kutengesa, asi kusimbisa hukama.
Kazhinji, iyo zvinangwa zvehukama kushambadzira Ndizvo:
Shanda hukama nemutengi. Izvi zvinoreva kuziva mutengi, zvavanoda uye zvaunogona kuvaitira.
Gadzira akateedzana marongero anoenderana nebasa revatengi, uye kwete zvakanyanya pachigadzirwa.
Zvakanakira kushandisa kushamwaridzana kushambadzira
Kushambadzira kwehukama kuri kuwedzera. Iye zvino mabhizinesi haatarisise zvakanyanya pakuwana kutengesa nekukurumidza, asi kune vatengi vanovaziva vanogara navo uye nekudaro vanowana sevhisi iri nani kwavari. Zvakafanana nemakambani enhare. Kunyangwe iwo mareti avanayo akafanana kune wese munhu, chavanotsvaga kuyedza kugutsa mutengi uye, nekuda kweizvi, ivo vanopa mabhonasi kana zvinopihwa izvo zvinogona kuvabatsira kugara kwenguva yakareba sezvinobvira. Zvakanaka, mune zvinoitika pazvitoro zvepamhepo zvakafanana. Uye ndezvekuti neakawanda mabhenefiti anowanikwa, akadai se:
Kuwedzera kweLTV. LTV ndicho chidimbu chinozivikanwa neUpenyu Hwehupenyu, kana kuti chii chakafanana, kukosha kunguva yenguva. Izvo chaizvo zvinoreva kuchengetedza vatengi kwenguva yakareba sezvazvinogona, kuyedza kuwedzera kukosha uye kuita kuti mutengi anzwe semunhu, uye kwete senge kondirakiti nhamba.
Ita kuti vave vamiriri. Kana iwe uine webhusaiti kwavanokubata zvakanaka, kwavanokutengesa zvichibva pane zvaunoda (uye kwete zvavanoda kutengesa), uye kuti iwe unonzwawo kuti vane hanya newe, haufunge here kuti uchakurudzira saiti iyi kune imwe mhuri kana shamwari? Mune mamwe mazwi, iwe unowana vakavimbika vatengi vanozokukurudzirawo iwe kune vamwe.
Unoderedza mari. Unotenda kana kwete, kushandisa mari kushambadza uye kushambadzira kusvika kune vamwe vatengi kwadzikira. Pakutanga unogona kusaenda, asi sezvo uine vatengi vakavimbika hauchazofaniri kubhadhara kushambadza kana kuzivikanwa, vatengi vako vanenge vatozviziva iwe.
Anofara mutengi, anofara kutenga. Fungidzira iwe uchipinda muchitoro. Iwe unotanga kutarisa zvinhu uye kamwe kamwe mubatsiri wemuchitoro anouya kwauri achibvunza zvauri kutsvaga. Iwe unozopindura zvechokwadi kuti urikutarisa, asi ko kana munhu iyeye akasafamba uye achikutevera nguva dzose? Mukupedzisira, iwe unozopedzisira wabva muchitoro nekuti hauna kugadzikana. Zvakanaka, izvi zviri munyika yepamhepo zvinoitika pavanokugutisa nezvigadzirwa zvine chekuita neavo vawaona, kana ivo kuyedza kukupa izvo zvaunogona kutenga. Zvino, kana pachinzvimbo chekuita izvozvo, iwe unotarisana nezano rinokubatanidza iwe nemutengi, haufunge here kuti vanozogutsikana kuve muchitoro uye nekuona zvigadzirwa vasina kunzwa kuti izvo zvaunoda kuti vatenge?
Maitiro ekuishandisa kune rako bhizinesi
Mukati mekutengesa kwechinyakare, ivo vakaitwa mazano mushure mekutengesa kunoitika, seemail yekutengesa-shure kuti uzive kana iwe waifarira zvawakatenga, kana iwe uchigutsikana nechigadzirwa, nezvimwe.
Asi, mune iyo nyaya ye kushambadzira kwehukama, zvinoenderera mberi. Dzimwe nzira dzinogona kuve:
Kutumira post-sale maemail kana iwe wakatenga chimwe chinhu asi zvakare unofadza zuva rekuzvarwa kana gore rinofadza semutengi.
Kutumira mavhidhiyo ane chekuita nechigadzirwa chawatenga kuitira kuti iwe uzive mabasa ese aanogona kuve nawo.
Makomendi pasocial network. Makambani anogara achitarisira kuti vatengi vataure pane zvavanotumira; asi pano zvaisazove zvakadaro, asi zvinopesana. Tumira zvirevo pasocial network kuti uite hukama navo.
Tumira iwe ruzivo. Chishamiso, chimwe chinhu chinoita kuti unzwe kudiwa nekambani.
Mipiro. Sekudzikisira kana kukwidziridzwa kwakakosha kukuita kuti unzwe wakasarudzika.
Iye zvino ndiyo nguva yako yekufunga nezvehukama hwehukama hwekutengesa bhizinesi rako. Pakutanga zvinogona kukubhadharira, asi chinhu chakanaka ndechekuti iwe unogona kuzvishandura zvichibva pane zvaunodzidza kuti uwane zvakanakira iwe kuchitoro chako chepamhepo (kana kune webhusaiti yako zvakajairika).
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Chii chinonzi kushamwaridzana kushambadzira
Wepamusoro 10 vanodonhedza vanopa muSpain